मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘चिकित्सा विधेयक डा. केसीकै योगदानले पास भयो, अब अनसन फिर्ता लिए हुन्छ’ - Everest Dainik - News from Nepal
मन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘चिकित्सा विधेयक डा. केसीकै योगदानले पास भयो, अब अनसन फिर्ता लिए हुन्छ’
काठमाडौं, माघ १३ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री पोखरेलले अनसनरत डा. केसीलाई यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले विधेयकले डा. केसीका सम्पूर्ण मागलाई समेटेको दाबी गरे। उनले भने, ‘संसदको एउटा प्रक्रियामा गएर विगतमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भनिसकिएपछि उहाँले यही बेलामा अनशनको बाटो किन पक्रिनुभयो, अचम्म लागेको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनप्रतिनिधि संस्थाको सर्वोच्चतालाई ध्यान दिँदै र सम्मान गर्दै उहाँले अनशन फिर्ता लिनुपर्छ।’ अनशन फिर्ता लिएपछि डा. केसीकै गरिमा बढ्ने उनको भनाई छ।
याे पनि पढ्नुस डा केसीको आन्दोलनमा राप्रपा विद्यार्थी सङ्गठनको ऐक्यबद्धता
चिकित्सा विधेयक डा. केसीको पनि योगदानको कारणले पास भएको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले सहमतिलाई टेकेर विधेयक बनेको दाबी गरे।
ट्याग्स: Dr Govind kc, Girirajmani Pokhrel